FAMPAHALALANA SY SARY DINGO - ALIKA
Fampahalalana sy sary Dingo
Ity dia Lindy , Dingo notezaina ho biby. Sary natolotr'i Nic Papalia, sary nalain'i Jamie Sciban
Alika Teratany aostralianina
Ny maso Dingo dia manana maso matanjaka izay tsy mitovy amin'ny loko mavo na volomboasary. Ny sofina tena finday, kely ary boribory dia voajanahary. Ny rambondanitra tsara tarehy sy miseho ary milentika dia milamina ary lava ny halavany. Ny aoriana dia mahia sy hozatra. Malemy ny palitao. Ny halavany, ny haavony ary ny endriny dia samy hafa arakaraka ny toetrandro. Ny lokon'ny palitao mahazatra dia volomparasy mavo, saingy mety hitranga amin'ny loko mainty na fotsy, anisan'izany ny albino boribory tsindraindray. Dingoes madio rehetra dia misy volo fotsy amin'ny tongony sy ny tendrony rambony.
Ny Dingo dia karazany mbola tsy nokolokoloina tanteraka. Saika tazomina ho namana foana io. Ny ampahany dia noho ny fitokanana lavitra, fa koa amin'ny tsy fahampian'ny fidiran'ny olombelona. Dingoes tsy voaofana dia mpinamana tsy mendrika ary tsy mora zarina amin'ny fankatoavana. Ny fampiofanana ny fankatoavana dia tanterahana amin'ny alàlan'ny hatsaram-panahy, faharetana ary tanana mafy orina nefa malefaka. Ny dingo dia azo tazomina ho biby fiompy raha nalaina avy tao amin'ny fako alohan'ny 6 herinandro. Amin'ity fahatanorany ity dia azo zahana izy ireo, saingy mihoatra ny 10 herinandro dia tsy tokony hoesorina any anaty ala izy ireo. Raha voaofana sy karakaraina araka ny tokony ho izy ny Dingo dia afaka manamboatra biby fiompy tena tsara sy tsy manam-paharoa. Izy ireo dia voalaza fa afaka manao mailaka sy fankatoavana amin'ny ankapobeny. Ny Dingo dia manana toetra tsy mahazatra - mpihanika hazo tsara ary indraindray somary manalavitra azy izy ireo, saingy toetra mahaliana ireo ary mitovy sokajy amin'ireo zanak'olo-mpiray tam-po aminy akaiky indrindra, ny Alika mpihira any Guinea Vaovao ary ny Spitz Finnish , fa mampiseho ireo toetra mampiavaka azy. Tsy mitovy ny fihenan'ny nify sy ny fanafohezana ny valanoranony izay manavaka ny karazany amin'ny alika amin'ny razambeny, ny Indiana Plains Wolf. Toy ny amboadia ihany, ny vavy Dingo dia tsy manana afa-tsy tsingerina fiompiana iray isan-taona. Tsy toa ny alika, ny Dingo dia misafidy vady mandritra ny androm-piainany, indraindray mitomany ho faty aorian'ny famoizana ny vady aman-janany. Matetika a fako pups dia hita ao amin'ny loakan'ny hazo, voaaro tanteraka amin'ny lafiny rehetra, miaraka amina tohodrano miambina eo aloha. Na izany aza, matetika dia manjary bibilava bibikely. Ny fianakavian'i Dingo dia azo henoina miaraka manao feo alohan'ny fihazana. Izy ireo dia manana toe-tsaina matanjaka amin'ny fiaraha-miasa ary miaina anaty fonosana . Ireo vondrona ireo dia mihaza amin'ny alina. Miasa mangina izy ireo ary tsy mianatra afa-tsy ny mihombo amin'ny fiarahana amin'ny kaninina hafa. Izy ireo dia mifampiresaka amin'ny alàlan'ny tabilao mampiavaka azy. Ny Dingo dia mety mihaza irery na any amin'ny fianakaviana, fa tsy dia ao anaty fonosana. Sakana ho an'i Dingoes ny rano ary hihena fotsiny ny ankamaroany fa tsy hilomano. Dingoes dia tsy saro-kenatra amin'ny olona ary niverina tany an'ala. Mba hivelomana any an'efitra dia nianatra nilalao posum izy ireo ary maty tsy fantatra. Tsy dia mampiseho herisetra ny Dingo. Fanenjehana an-taonany maro no namorona sidina fa tsy toetra manaikitra. Ny Dingoes lahy tazomina toy ny biby fiompy dia tsy milamin-tsaina mandritra ny vanim-potoana fiompiana. Ny alikaola sy ny vanim-potoana fiompiana dia manodidina ny Mey / Jona. Hatramin'izao dia misy alika kely any Aostralia ihany fa tsy aondrana any ivelany, na izany aza dia mety hiova izany satria manosika ny Dingo fanciers hampianatra ny olona momba an'io biby miavaka io. Ny vidin'ny alika kely dia $ 500 - $ 1000 Aostralianina. Ny Dingo Farm any Aostralia dia manana dingoes maherin'ny 100 ary miteraka alika mba hiantohana ny fanambinana ao amin'ny 'ra mandriaka.' Ny tompon'ny Dingo dia mila maneho fahefana voajanahary. Milamina, nefa hentitra, matoky tena ary mifanaraka amin'ny lalàna. Anarana Communication tena ilaina.
Hahavony: 19 - 23 santimetatra (48 - 58,5 cm)
Lanja: tokony ho 50 - 70 pounds (23 - 32 kg)
Na izany aza, alika hatramin'ny 55 kilao (55 kg) no voarakitra an-tsoratra.
Ny Dingo dia tsy atolotra ho an'ny fiainana an-trano. Alika dia izy ireo fa raha raisina amina fianakaviana iray dia tsy tokony roahina ao an-tokotany, fa tokony horaisina ao anatin'ny ankohonana. Ny vala misy fefy azo antoka dia tsy maintsy atao. Ny Dingo dia mila hetsika sy toerana malalaka. Amin'ny maha biby fiompy azy ireo dia tsy tokony hesorina amin'ny fantsom-panafody izy ireo. Afaka mahazaka toetr'andro mafana izy ireo.
Ny Dingo dia biby tsy voafidy izay tokony hanana fanatanjahan-tena be dia be. Rehefa babo dia mila raisina a mandeha isan'andro, mandeha lavitra na jogging, mba hanomezana fahafaham-po ny fahatsapan'izy ireo fifindra-monina voajanahary.
Afaka miaina mihoatra ny 20 taona.
Ankizy 1 ka hatramin'ny 10, eo ho eo amin'ny 5
Ny palitao mahatohitra toetr'andro an'i Dingo dia mikarakara ny tenany. Ity karazana ity dia tsy manana fofona doggie.
Ny Dingo dia biby dia biby nentin'ny lehilahy primitive tany Aostralia tao amin'ny fanjakana efa an-trano sahabo ho 4000 taona lasa izay. Inoana fa ny Dingo no razamben'ny karazan'alika rehetra, ny fototry ny karazan'alika 600 tena izy. Ny alika sy ny olona dia nanao ny diany alohan'ny nanesorana an'i Aostralia hiala ny tanibe ary voahodidin'ny rano. Ny kapiteny William Damphier, izay nanoratra momba ny alika dia tamin'ny 1699, dia nanamarika tamin'ny fomba ofisialy ny Dingo. Tany am-boalohany notazonin'ny vondrona teratany aostralianina ho loharanon-tsakafo maika. Taranak'ireo pariah tany am-boalohany avy any Moyen Orient sy atsimo atsinanan'i Azia, lasa sadasada ny Dingo ary niverina tany an'ala. Miaraka amin'ny fanoloran'ny eropeana ny ondrilahy sy ny bitro any an-trano dia niroborobo ny mponina Dingo. Noho ny fihinan'ny Dingo ny biby fiompin'olombelona dia tsy madio sy tia ady ny fifandraisan'izy roa. Ny fitsabahan'ny olona amin'ny ekolojika voalanjalanja tonga lafatra ao Aostralia no tena nampangaina tamin'ny Dingo. Androany dia misy olona vitsivitsy ankehitriny no miahiahy ny alika tera-tany ho toy ny 'fosily velona' ary miasa amin'ny fandinihana sy hitehirizana azy. Ny Australian Australian Dog Training Society, miorina ao New South Wales, dia nanangana sy nampiofana Dingoes maro. Nasehon'ireo mpikambana azy ireo izany ary nitazona fihetsiketsehana fankatoavana sy fitaka ary ny teny filamatry ny fiarahamonina dia 'A Fair Go For Our Dingoes.' Ireo alika ireo dia miompana mora foana raha notezaina hatramin'ny fahazazany tamin'ny fianakaviana iray, saingy mitazona ny toetran'ny sidina sy ny fahamaotinana. Amin'ny faritra maro any Aostralia dia mbola heverina ho vermin izy ary tsy azo tazonina ara-dalàna. Ny faritra hafa dia manana ny fahazoan-dàlana henjana. Ny governemanta federaly aostralianina dia manasokajy ny Dingo ho toy ny biby dia ary tsy azo aondrana izany raha tsy avy ary mankao amin'ireo valan-javaboary sy zaridaina. Ny dingo dia tena tsy fahita any ivelan'i Aostralia. Ankehitriny ny Dingo dia tsy raisina ho tena alika, fa sokajiana ho karazan'alika azy manokana miaraka amin'ny anarana ara-tsiansa canis lupus dingo.
tabilao habe sy lanja spaniel akoho
Talli the Dingo eo amin'ny faha-8 taonany mijoro eo ambonin'ny vatan-kazo nianjera— 'Izy no ampahany sarobidy indrindra amin'ny fianakavianay.'
Dingo ho an'ny olon-dehibe
antsasaky ny boxer amerikana bulldog amerikana
Lindy , sary natolotr'i Nic Papalia
Lindy , sary natolotr'i Nic Papalia, sary nalain'i Jamie Sciban
Fanamarihana avy amin'i Nic Papalia— 'Manana DVD aho amin'ny famolavolana manokana hanomezana fiheverana sy fijerena zava-misy sy zava-misy momba biby fiompy mahafinaritra. Dingoes manao biby fiompy tsara be! '
Phoenix the Dingo amin'ny 2 1/2 taona avy any Aostralia— 'Zavaboary mahatalanjona indrindra nananantsika voninahitra ny fananana. Miresaka momba ny manan-tsaina, marani-tsaina, be fitiavana ary malemy paika! Ny tena zava-dehibe dia TSY izy ireo, ary Milaza aho fa 'TSY DOGO'! Fiofanana, tsara vintana HUH, azonao ampianarina zavatra vitsivitsy izy ireo fa miresaka * Mahaleo tena! Ny fiainanao / fomba fiainanao Tsy maintsy miova. Vetivety ianao dia mianatra izay dingoes, dia dingoes ary inona ny anao dingoes haha. Fa raiki-pitia aho '
Phoenix the Dingo amin'ny 2 1/2 taona avy any Aostralia
Sary natolotry ny Dingo Farm
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Dingo
Dingo Sary 1
Momba an'i Lindy the Dingo
Dingo dia tsy teny maloto
laboratoara sôkôla sy fifangaroan'ny collie border
tertera mainty sy mainty
karazana alika shih tzu pomeranian
laboratoara mainty mix mix australianina
mixeran'ny heeler manga aostralianina
afangaro malamute algas amin'ny amboadia